Xog- Khilaaf soo kala dhexgalay Cabdirashiid Janan iyo Dowladda Federaalka - Wardeeq 24 TV Xog- Khilaaf soo kala dhexgalay Cabdirashiid Janan iyo Dowladda Federaalka Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Xog- Khilaaf soo kala dhexgalay Cabdirashiid Janan iyo Dowladda Federaalka
Xog- Khilaaf soo kala dhexgalay Cabdirashiid Janan iyo Dowladda Federaalka
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in khilaaf uu soo kala dhexgalay Dowladda Federaalka iyo Wasiirkii hore ee Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan), oo 24-kii bishii March isu soo dhiibay dowladda.
Cabdirashiid Janan oo dowladda ay dib u dejin ugu sameysay dalka Turkiga ayaa bishii hore ee July dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, isagoona dowladda u sheegay inuu doonayo in uu ka mid noqdo Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka soo socda, tiiyoo ay dowladda ku gacan-seyrtay, waana halka uu ka bilowday khilaafkoodan.
Cabdirashiid Janan oo sidoo kale ay Dowladda Federaalka ka hor istaagtay inuu dib ugu laabto Gobolka Gedo ayaa ciidamadii uu kala soo goostay Jubbaland oo ku sugan Degmada Doolow uu ku amray inay isaga baxaan xeryaha ciidamada, sida uu wardeeq24 TV u sheegay Sarkaal ka tirsan Militariga Somaliya.
“Ninkan Cabdirashiid waa nin is bedel badan, markii uu dowladda isku soo dhiibay wixii hub ee ciidamadiisu haysteen waa loo lacageeyay, ciidamadiina dowladdaa qarameysay. Ka dib waxaa loo diray Turkiga oo muddo billo ah uu ku maqnaa, bishii hadda ee July daba-yaaqadeedii ayuu Turkiga ka soo laabtay, intaasna Muqdisho ayuu joogay.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Sarkaalkan ayaa yiri “Toddobaadkii hore ayuu la kulmay Madaxda Dowladda Federaalka, wuxuu yiri Xildhibaan baan doonayaa inaan noqdo ee booska Xildhibaanka beeshayda ku metela Golaha Shacabka, hala igu bedelo, waa laga diiday, wuxuu quud-dareeyay inuu Gobolka Gedo dib ugu laabto oo wixii uu u bartay iyo abaabul uu ka sameeyo, waana laga diiday, amarna waxaa lagu siiyay inuu dib ugu laabto Turkiga.”
Waxa uu intaa raaciyay “Ciidamadii uu kala soo goostay Jubbaland ee dowladda qarameysay, ka baxa buu yiri xeryaha ciidamada, isagiina meeshii uu ka deganaa Magaalada Muqdisho wuu ka guuray.”
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan uu Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ka codsaday in uu soo deggo hoygiisa, taasoo sida la sheegay uu Ina Warsame ka biyo diiday.
Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayan in Janan uu haatan ku sugan yahay hoyga Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliya, Cabdixmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala), kaasoo uu ka doonayo in amnigiisa uu sugo, haddii uu ahaa masuulkii dowladda ee ku hadaaqay heshiiskii horaan lagu soo xero geliyay ninkaasi.
Alcadaala iyo Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waa masuuliyiintii Cabdirashiid Janan ku soo dhaweysay Degmada Beled Xaawo, 24-kii bishii March. Fahad Yaasiin arrinta Janan waxaa uu kula mowqif yahay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dhanka kale wararka ka imaanaya Degmada Doolow ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada u daacadda ah Cabdirashiid Janan ay xiisad ka abuureen degmadaasi.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamada Dowladda ee ku sugan Beled Xaawo iyo Doolow lagu amray inay hub ka dhigis ku sameeyaan ciidamadaasi, inkastoo ay socdaan dadaalada lagu qaboojinayo xiisadaasi.
Cabdirashiid Janan ayaa xilligii uu isa soo dhiibayay waxaa uu Degmada Beled Xaawo ka sheegay in uu ku yimid heshiis is afgarad ah, oo uu la gaaray Dowladda Madaxweyne Farmaajo
Previous articleRa’iisal Wasaare Rooble oo maanta ku wajahan jeeda Dalka Masar
Next articleWararkii ugu dambeeyay Midowga Musharixiinta oo kulamadooda War kasoo saaraya